Hebei Wenwen Trade Co., Ltd. waa shirkad la qabsashada ay ka mid yihiin wax soo saarka, iibinta, dhoofinta, Shirkadda qaatay nidaamka maareynta ganacsi oo casri ah iyo kooxda ganacsiga shisheeye xirfadeed, u hoggaansanaayeen ah "daacadnimadiisa ku salaysan, marka hore macaamiisha" mabda 'a adeegga, ka waxyaabaha lagu dhoofiyo ee Ameerika, Australia, Yurub, Bariga Dhexe, koonfur bari Asia, Africa, in ka badan 40 dal iyo gobollada, ku guuleystay inta badan macaamiisha ammaan iyo kalsooni iyo aasaasay a xiriirka ganacsi muddada-dheer ee shirkadda cooperation.Our leeyahay noqday mid ka mid ah shirkadaha keentay maxalliga ah iyo ku kordhiyeen taagan horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah. Waxaan ku siin karnaa adeegyada OEM.
Faux dhogorta SAARKA, dhogorta MAQAARKA ;
Dhammaan noocyada kala duwan ee dhar Brygge, dhogorta faux, dhogorta been abuur ah, dhogorta dhogorta, Brygge jacquard, xayawaanka dhogorta dayashada, dhogorta tip-dheecaan, dhogorta macmal ah, dhogorta wan, raso sare dhar Brygge iyo alaabooyinka kale ee la xiriira kuwaas oo caan ku isticmaalo alaabta lagu ciyaaro, dhar, maro collar, dhar, dhar, dhogorta dahaarka, jaakad, hoose oo dhar, bustayaal, sooffa, katiifadaha, kabaha, barkimaha, barkimooyin, qalabka madaxtooyada, qaaxo, dharka guriga iyo alaabta kale oo badan.
Caag strips quwad / EPDM / PVC ,
Isticmaala EPDM, PVE, TPE, CR, NR, NBR, TPR, silica iyo kuwa kale si ay u sameeyo taxane ah oo alaabta, arkuu sida caag strips dhagixiina way, albaabka iyo strips caag suuqa kala dhagixiina way, xumbaynaysa dhagixiina way strips, isbonji strips quwad caag, waxyaabaha caag decoration. Codsatay in gaari, Dhismaha maraakiibta, dhismaha albaabada iyo daaqadaha, qalabka korontada, musqusha, injineernimada dhuumaha iyo warshadaha farsamo iyo korontada.
MIDABKA TAARIKADA bir ,
ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa lagu prepainted steel galvanized iyo steel galvanized iyo steel galvalume iyo steel anti-farta iyo sheet bir jiingado, taas waxaa badanaa loo isticmaalaa in warshadaha yaryar, dukaamada, boosteejooyinka tareenka, garoomada, garoomada diyaaradaha, dhismayaasha ganacsiga, bakhaarada, iftiinka steel iyo doonnida oo dhismaha, warshadaha qalabka baabuurta iyo guriga qabsaday.
Dhammaan alaabta, kuwaas oo u hoggaansamaan ISO 9001 Management System Tayo iyo ISO 14001 Nidaamka Maareynta Deegaanka, iyo sidoo kale gaarsiisan yahay heerka qaran Chinese iyo heerka ASTM.
Waayo, relateds dheeraad ah waxyaabaha fadlan booqo bogga internetka rasmiga ah: www.wenwencf.com
1) In ka badan 10 sano waayo-aragnimo dhoofinta on badeecadaha la xiriira nagu xirfad badan!
2) Nidaamka control adag oo tayo leh ka dooranayso waxyaabaha ay u processing!
3) qiimaha tartanka iyo waqtiga dhalmada gaaban!
4) In la siiyo adeeg ahaanayta saarka relateds!
Hebei Wenwen Trade Co., Ltd. had iyo jeer ku taal by istiraatiijiyad ganacsi ee "wax soo saarka oo tayo sare leh & qiimo macquul ah" ka, fikradda adeegga "taas oo muujinaysa ixtiraam inaad & isku dayaya fiican", iyo ruuxa xirfadeed ee "daacadnimo, hal-abuurnimo, xamaasad, sureness "si ay u bixiyaan macaamiishu soo saarka iyo adeegyada ugu fiican.